Hotely sy fitsangatsanganana alaina sary an-tsaina. Tsara kokoa? Angamba. Mazava ho azy fa tsy mitovy! | Vaovao momba ny dia
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovaon'ny seranam-piaramanidina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Hotels & Resorts • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News
Hotely sy fitsangatsanganana namboarina indray. Tsara Kokoa? Angamba. Mazava ho azy fa tsy mitovy!
Hotely sy fitsangatsanganana alaina sary an-tsaina
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Hotely sy fitsangatsanganana namboarina indray. Tsara Kokoa? Angamba. Mazava ho azy fa tsy mitovy!
"Tsy irinao mihitsy ny handehanana any amin'ny krizy goavambe" Rahm Emanuel (mpanao politika amerikana: mpanolotsaina ny filoham-pirenena amerikana Bill Clinton; ny filoham-pirenena amerikana Barack Obama, ary ny ben'ny tanànan'i Chicago teo aloha). Raha tsy tsara kokoa, dia tsy mitovy ny hotely sy ny dia lavitra.
Dr. Eran Avraham, ankavia ary Dr. Izaak Cohen avy ao amin'ny Oniversiten'i Bar-Ilan dia mamakivaky ny tionelina fanadiovana eo am-baravaran'ny Bloomfield Stadium any Tel Aviv. Saripikan'i Yoni Reif
Aiza no hisy antsika raha tsy misy hotely? Hotely kely, hotely tsy lafo, hotely mirentirenty be… ny trano fandraisam-bahiny dia ampahany lehibe amin'ny traikefa amin'ny dia rehetra, na inona na inona tanjona na toerana misy azy. Talohan'ny areti-mandringana, ny trano fandraisam-bahiny dia nanome asa iray isaky ny asa 25 ao amin'ny firenena (8.3 tapitrisa eo ho eo) ka nanome 660 miliara dolara ho an'ny harin-karena faobe amerikana. Trano fandraisam-bahiny iray misy efitrano 100 nozahana isan'alina no nanohana asa efa ho 250 tao amin'ny vondrom-piarahamonina iray, ka nahazo 18.4 tapitrisa dolara tamin'ny fandaniam-bolan'ny vahiny tany amin'ny magazay sy trano fisakafoanana akaiky. Ny indostria dia nahazoana $ 186 miliara dolara amin'ny hetra eo an-toerana, fanjakana ary federaly, isan-taona. Ka - mila trano fandraisam-bahiny miverina sy miasa ve isika? Izany mihitsy!
Nieritreritra aho fa, angamba, hisy valiny ara-tsosialy / toekarena / indostrialy tsara amin'ny areti-mandringana ary io angovo vaovao io dia horaisin'ireo mpitarika ao amin'ny hotely, indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Nisy fiovana teo amin'ny fitondran-tena sy ny fanovana ny rafitra; na izany aza, mipetraka ny fanontaniana - efa lasa lavitra ve ny indostrian'ny hotely sy fizahan-tany hanome toky fa ny mpandeha dia nanena ny risika mifandraika amin'ny dia mandritra ny areti-mandringana.
Te-hitsangatsangana ny olona! Na lany fotoana amin'ny fitenenana amin'ny alàlan'ny Facebook (indrindra ny Women Who Travel), na ny famakiana ny fikarohana (Oliver Wyman), dia misy ny fangatahana mihoampampana hivoahana sy hivezivezy. Toa aleon'ny mpandeha an-tany (araka ny filazan'i Wyman), ny hotely lehibe (80 isan-jato) noho ny hofan-trano (57 isan-jato) ary ny mpitsangatsangana amerikana koa misafidy hotely lehibe (83 isan-jato) noho ny hofan-trano (61 isan-jato). Na ny sinoa aza dia miankina amin'ny famandrihana amin'ny trano midadasika (94 isan-jato) miaraka amin'ny antsasaky ny (49 isan-jato) mifantina ny hofan-trano.
Misafidiana eo an-toerana
Ny fikarohana nataon'ny Wyman dia nahatsikaritra fa ireo navotsotra tamin'ny quarantine / mitoka-monina dia mety hisafidy fitsangatsanganana an-trano noho ny fitsidihana iraisam-pirenena ho an'ny fialantsasatra akaiky ho avy. Na avy any Chine, Italia, Espana na USA ny mpitsangatsangana dia mijanona eo akaikin'ny toeram-ponenany izy ireo, izay midika fa ho an'ny mpandeha amerikana, ny fiakarana amin'ny famandrihana dia mety ho voamariky ny fanjakana akaiky, Kanada sy Karaiba raha eoropeanina sy sinoa. dia toa mifidy toeran-kaleha lavitra ny halaviran'ny fiara.
Ny fikarohana Wyman dia nahitana ihany koa fa ny mpandeha varotra dia maniry ny hiverina amin'ny asa aman-draharaha miaraka amin'ny saika 75 isan-jaton'ny Amerikanina mpandeha an-dranomasina mikasa ny hanao dia iray (na mihoatra) ho an'ny orinasa raha vantany vao esorina ny fameperana ny fivezivezena ary apetraka ny politikam-pivezivezena eo amin'ny orinasa.
VAOVAO. Inona no antenaina
Dia lavitra tsy mikasika
Manomboka amin'ny fotoana ieritreretanao ny dia (raharaham-barotra na fialam-boly) ka hatramin'ny fotoana fitsidihanao trano fandraisam-bahiny sy hodianao mody, noho ny finday finday, ny fampiharana ary ny biometrika, dia tsy mila mifandray amin'ny olombelona na mikasika na oviana na oviana ianao (na oviana na oviana) efijery. Ny mombamomba ny ID manokana dia hotehirizina ao amin'ny Cloud ary azo alefa amin'ny alàlan'ny telefaona finday ary voamarina miaraka amin'ny fanekena ny tarehy. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy ny hôtely dia hanavao ny fampahalalana - manomboka amin'ny satan'ny sidina, ny fisokafana / fanidiana ny sisin-tany mifandraika amin'izany, hatrany amin'ny toerana misy ny efitrano sy ny fisian'ny fitaovana elektronika.
2. Very ny valizinao ny kaompaniam-pitaterana? Apetraho amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fitarainanao. Ny interface interface amin'ny programa misokatra (API) dia hanokatra ny angon-drakitra ilaina amin'ny pass pass finday, ny fidirana an-tsokosoko ary ny fanamarihana, ny fiarovana, ny fidirana an-trano, ny famindrana ary ny fitakiana entana.
3. Ireo mpitsongo fahasalamana amin'ny seranam-piaramanidina sy hotely. Ny milina sasany dia hamaritra raha misy ianao Covid-19 tsara amin'ny famakiana ny maripanao raha ny hafa kosa hamaky havokavoka sy ny fo.
4. Breathalyzer. Nisy mpandraharaha israeliana namolavola fitsapana fofonaina iray minitra izay mamaritra olona iray manana COVID-19. Rehefa mahazo fankatoavana avy amin'ny US Food and Drug Administration izy dia mety hiseho amin'ny seranam-piaramanidina sy hotely.
5. Tazomy ny halaviranao. Ny elanelana ara-batana (miaraka amin'ny fanampian'ny marika sy ny teknolojia) dia hibaiko ny elanelana misy eo amin'ireo mpandeha fiaramanidina sy ny mpiasa, eo amin'ny mpiasa hotely sy ny vahiny (sy ny vahiny hafa).
6. Midira / mivoaka ny efitrano / tranobe? Aza adino ny mitana varavarana fa alefaso ny tananao hiteraka varavarana mandeha ho azy na mampiasa pedal tongotra na fanekena tarehy.
7. Plexiglass dia ho hita hatraiza hatraiza, hampisaraka ny mpamatsy vola amin'ny mpanjifa any amin'ny fivarotana antsinjarany, manome sakana eo amin'ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina sy ny hotely sy ny mpandeha ary eo anelanelan'ny fisakafoanana sy ny vahiny eo amin'ny latabatra manaraka.
8. Adinoy ny carte de crédit sy carte de crédit. Ny smartphone dia hampiasaina handoavana ny zava-drehetra.
9. Fanadiovana eny amin'ny habakabaka. Manomboka amin'ny toerana fanadiovan-tanana maro ka hatrany amin'ny tsimok'aretina famono otrikaretina isan'ora, zavona ary zavona, dia mazava ho azy ary matetika (na dia mampametra-panontaniana aza ny faharetan'ireo asa ireo ary, rehefa mandeha ny fotoana, dia mety soloina robot ny olona).
10. Fanadiovana ny efitrano fandraisam-bahiny. Hotely maro no manala ireo zavatra tsy ilaina rehetra izay nanampy korontana, mikraoba ary vovoka tao amin'ny efitranon'ny hotely. Tsy hisy (soa ihany) fa tsy hisy ondana haingon-trano, lamba firakotra fanampiny, penina, fonosana, magazine, remote amin'ny fahitalavitra ary menu amin'ny serivisy ao amin'ny efitrano.
11. Ny famonoana otrikaretina dia ampiasaina amin'ny faritra rehetra (izay hita), manomboka amin'ny vavahady sy ny jiro, hatrany amin'ny seza sy birao, thermostat, kojakoja fidiovana, varavarankely, ary lamba ahantona, mandra-pivoaran'ny hotely ny sehatry ny lamba sy ny fampiasana lamba manohitra mikraoba. sy fitaovam-panorenana.
12. Sakafo sy zava-pisotro. Azo ovaina na esorina ny serivisy. Hatao irery ny condiment, ho afaka ny kaopy, safidy fisakafoanana maro no hosoloina ny masinina mandray sy mandeha ary / na mpivarotra varotra.
13. Raha mitohy ny serivisy amin'ny efitrano, dia azo alefa amin'ny tranonao ireo entana amin'ny alàlan'ny robot. Hampandrenesina hafatra amin'ny findainao ianao fa tonga ny robot ary mametraka ny entanao eo ivelan'ny varavaranao. Rehefa avy nisakafo ianao dia mandefasa IM ary hiverina ilay robot mba hanala ireo lovia maloto eo am-baravaranao.
14. Elevator. Ny fandinihana avy amin'ny Upgraded Points dia mamaritra fa ny bokotra ascenseur fandraisam-bahiny eo ho eo dia manana mikraoba 1477 heny noho ny tantanan'ny varavarana fandroana ao an-trano. Izy io koa dia misy mikraoba 737 heny mihoatra ny seza fidianao manokana. Mba hamahana izany olana izany, ny toeram-pivarotana lehibe iray tao Thailand dia nanolo ny bokotra amin'ny pedal tongotra ho an'ny fifantenana ny gorodona; antenaina fa hanaraka an'io prototype io ny trano fandraisam-bahiny sy tranom-barotra. Raha tsy manana pedal ny ascenseur anao dia miezaha mampiasa tsatokazo, paoketra, penina na penina amin'ny pensilihazo.
15. Ny faritra anti-mikraoba dia mety hanolo ny vy tsy misy fangarony sy ireo fitaovana fananganana malaza hafa ary hampiasaina amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny lobbies ka hatramin'ny latabatra, hatramin'ny trano fisakafoanana ka hatramin'ny kaontera, latabatra ary kojakoja ao an-trano.
16. Toeram-panadiovan-tena. Ny trano fandraisam-bahiny vaovao (na ireo fananana izay havaozina) dia mety hampiditra metaly fanadiovan-tena ao amin'ny trano fidiovana sy resina manokana amin'ny gorodona sy ny rindrina izay ho toy ny Teflon ho an'ireo viriosy… tsy ho afaka hifikitra amin'ny tany izy ireo ka ho tafavoaka velona.
17. Ny sokajy efitrano fandraisam-bahiny dia hesorina ary soloina studio sy suite miaraka amina lakozia sy laundries hampihenana ny fikarakarana trano sy ny fanompoana amin'ny efitrano. Ny vahiny dia afaka mahandro ny sakafony manokana sy manasa lambam-pandriana sy lamba famaohana ho azy ireo manokana.
18. Jiro UV no ampiasaina hanadiovana toerana sasany rehefa tsy hipetrahana, toy ny trano fidiovana ho an'ny daholobe, amin'ny alina.
19. Hatsaraina ny rafitra fanaterana ny HVAC sy ny rano, manatsara ny sivana sy fanadiovana.
20. Ny dobo filomanosana dia miverina amin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao noho ny teknolojia vaovao novolavolain'ny biokimia. Sivana ny rano mba hialana amin'ny microcontaminants (izany hoe viriosy, bakteria, holatra) ary fitambarana voajanahary atambatra amin'ny onja ultrasonika samy hafa ahafahan'ny loto mandoto miaraka amin'ny filtration mora. Ny rano dia arahi-maso 24/7 hahitana fandrahonana (tahitisbreeze).
Fanatonana tsy manam-paharoa amin'ny fanamby
Tanja Hernandez, Talen'ny Fahasalamana sy ny fiarovana ny tontolo iainana, Baccarat Hotel New York City
Ny vahinin'ny fihaonambe dia nangataka (mialoha ny fahatongavany) hamantatra tena raha toa izy ireo ka anisan'ny vondrona atahorana ho an'ny COVID-19. Raha eny dia angatahina izy ireo hanemotra ny diany mandra-pahatapitry ny vanim-potoana mety hitranga.
Baccarat Hotel New York. Ny teknolojia Pop ID dia manome famakiana mari-pana eo noho eo izay alefa amin'ny telefaonin'ireo mpiasa sy mpitarika ao amin'ny departemanta. Ny vahiny sy ny mpiasa dia tsy maintsy manao takelaka tarehy ary saron-tava natao ho an'ny Baccarat no azo atao rehefa angatahina. Ny mpitsidika voasoratra anarana - no havela hananana ny trano.
Jumeirah Al Naseem (Dubai). Ny efitrano dia hijanona tsy misy mpiorina mandritra ny 3 andro aorian'ny fijanonana tsirairay na handalo fizotra fogging fidiovana alohan'ny hamerenany azy.
Manome serivisy fanadiovana entana sy famonoana otrikaretina ho an'ny vahiny amin'ny fahatongavany ary ny valizy dia diovina alohan'ny hanaterana azy ireo any amin'ny efitrano.
Mandarin Atsinanana. Diovina sy soloina isan'andro ny lambam-pandriana sy ny lamba firakotra; kitapo ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny hampihenana ny fifandraisana tafahoatra.
MGM Resorts. Ny politika dia misy halavirana 6 metatra, izay azo atao amin'ny filokana, miaraka amin'ny torolàlana amin'ny gorodona ho fampahatsiahivana. Rehefa tsy azo atao ny manalavitra, ny sakana amin'ny habaka hafa dia misy mpampisaraka plexiglass, ary / na fiarovana ny maso ho an'ny mpiasa.
Hotely sy hotely fandraisam-bahiny Montage / Resorts / Pendry Hotels & Resorts. Mahazo mpikambana 30 andro ny vahiny amin'ny serivisy ara-pahasalamana nomerika an'ny One Medical ary mahazo mpikambana isan-taona ny mpiara-miasa monina any Etazonia. Ny serivisy dia manome fidirana amin'ireo mpitsangatsangana amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana mety, na dia lavitra ny trano aza izy ireo amin'ny alàlan'ny fifampiresahana horonan-tsary na hafatra azo antoka.
Ny fiara tonga miaraka amin'ny vahiny dia ho voadio amin'ny alàlan'ny milina fanamainana alohan'ny hidirany ao amin'ny lavarangana hotely; toerana fijanonana valet azo alaina amin'ny fangatahana. Ny valeta dia manadio ny lakilen'ny fiara sy ny teboka fikikisana rehetra (izany hoe, fantsom-baravarana, seza fiarakodia, fehikibo fipetrahana eo am-pamiliana, boaty fanamoriana, fitaovana arofanina) alohan'ny hipetrahana miaraka amin'ny Virex II 256; vahaolana nofafazana tasy madio ary apetaka.
Mampiasà UV Wands ho an'ny latabatra fandraisam-bahiny sy ny efitrano fandraisam-bahiny ary koa ny sivana rivotra isaky ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny toerana ho an'ny besinimaro ary soloina amin'ny fandaharam-potoana mihabe.
Fitaovana maivana ultraviolet ampiasaina hijerena ny fahadiovana; fanadiovana ny fantson-drivotra ampiasaina isaky ny fahatongavana sy fiaingana; fanadiovana etona isan-kerinandro amin'ny karipetra; gel sy savony fanoherana bakteria apetraka ao amin'ny trano fidiovana tsirairay.
Wiesbaden Casino (Alemana). Mampahafantatra ny rafi-pitiliana tazo tsy ifandraisana ho an'ny vahiny sy ny mpiasa hampihena ny risika amin'ny aretina ary ampiasaina alohan'ny hidirany ao amin'ny casino.
Manome teknisianina mpitsabo voamarina maika (EMT) eo an-toerana 24/7 mandritra ny fotoana fanokafana voalohany.
Ho an'ireo firenena manaja ny mpifanolobodirindrina aminy dia misy bontolo fitsangatsanganana napetraka ary ampiasaina eo anelanelan'ny fanjakana Baltika any Estonia, Latvia ary Litoania. Izay tonga avy any ivelan'ireto firenena ireto dia tokony hitokantokana mandritra ny 14 andro; na izany aza, afaka mivezivezy malalaka any amin'ireo firenena ny olom-pirenena. Ny fipoahana mety dia ahitana an'i Gresy, Sipra ary Israel ary mety hisy ny fipoahana eo anelanelan'ny Singapore sy Malezia.
Adinoy ny mitondra namana maniry anao hahita dia soa aman-tsara sy mahafinaritra. Ny seranam-piaramanidina angamba dia hametra ny fidiran'ny mpandeha fotsiny. Alohan'ny hidiranao amin'ireo mpandeha amin'ny seranam-piaramanidina dia toa mandeha mamaky ireo tionelina famonoana otrikaretina izy ireo, zahana amin'ny scanner mafana ary ireo "mety manidina" ihany no avela hiditra amin'ny seranam-piaramanidina. Ny fakan-tsary mafana dia efa ampiasaina ao Heathrow, seranam-piaramanidina San Juan any Puerto Rico ary Paine Field (Seattle). Hisy safidy tsy azo kitihina amin'ny fisavana amin'ny alàlan'ny fampiasana biometrika (face ID). Ny valizy dia mety handalo tionelina alohan'ny hametrahana azy amin'ny fiaramanidina.
Ny fanaraha-maso ny fandriam-pahalemana dia azo alamina amin'ny fotoana voatondro hahafahana manala ireo andalana lava (efa ampiasaina amin'ny seranam-piaramanidina Montreal). Ny seranam-piara-manidina any Pittsburgh sy Hong Kong dia mampiasa robot manadio mba hamonoana ny gorodona ary mety hakatona mandritra ny alina mba hahazoana fanadiovana lalina.
Airlines. Ny fomban'izy ireo manokana
Ny sidina an'habakabaka dia mety tsy hanaraka ny dian'ny hotely na ny fizahantany fizahan-tany. Ny fanalavirana ara-tsosialy dia tsy ao anatin'ny lisitry ny zavatra tokony hataon'izy ireo. Na dia manakana ny seza afovoany aza i Delta sy JetBlue amin'izao fotoana izao dia tsy hitohy izany rehefa mihabe ny habetsany. IATA (Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka) dia tsy manohana ny halaviran'ny seranam-piaramanidina satria loza ara-bola izany. Ny saram-piaramanidina dia tsy maintsy nitombo hatramin'ny 54 isan-jato raha toa ny lalàna mifehy ny seza afovoany izay manao fiaramanidina manidina amin'ny 67 isan-jaton'ny fahafaha-manana ary ambany ambany ny 75-81 isanjaton'ny takiana mba hamakiana azy.
Amin'ny fifantohana matotra amin'ny fanadiovana dia tokony ho vonona ny mpandeha hanadio ny sezany sy ny toerana manokana misy azy amin'ny alàlan'ny dian-tànana Lysol, ankoatry ny rafitra fanadiovan-tseranana. Nilaza ny Southwest fa ny fiaramanidina rehetra dia mahazo fanadiovana lalina mandritra ny 6 ora isa-kariva raha ny Delta kosa dia manafotra ny asany eo anelanelan'ny sidina tsirairay. Na zahana na / na toerana maharitra ity fizotran-javatra ity dia mila manatsara ny fahadiovana mivantana eo am-pelatanan'ny mpandeha.
Maniry mafy ny hanafoana ny fitokana-monina ny olona ary hiroso amin'ny "fivelomany", ary ny fitaterana safidy dia toa amin'ny fiara, indrindra raha tsy mihoatra ny 650 kilaometatra ny halavirana. Nandritra ny fitsangatsanganana Longwoods International farany teo - fandalinana ny fihetseham-po, 86 isan-jaton'ny mpandeha no nilaza fa nikasa ny hitsidika toeran-kafa any Etazonia izy ireo rehefa nesorina ny fameperana ny areti-mifindra. 8 isan-jato monja no nilaza fa tsy mikasa ny handeha - na aiza na aiza- mandritra ny 6 volana ho avy.
Na dia toa safidy azo atao aza ny bisikileta hivoahana sy hivezivezy, ny Adventure Cycling Association dia mandrara ny mpitaingina bisikileta tsy handray anjara amin'ny dia lavitra amin'ny bisikileta amin'izao fotoana izao. Ny toeran'ny Association dia ny andraikitry ny mpandeha bisikileta tsy hanimba ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina madinidinika sy ny faneriterena ny loharanom-pahalalana voafetra ary, noho ny "fialofana am-pitoerana" sy ny kaomandy momba ny quarantine - ny fisian'ny serivisy dia tsy mifanaraka sy tsy ampoizina.
Ny Fikambanana dia tsy afaka hamaritra hoe rahoviana no tsy hampidi-doza ny fanaovana dia lavitra; na izany aza, nofoanan'izy ireo ny fitsangatsanganana notarihin'izy ireo hatramin'ny 19 Jolay 2020.
Fotoana tsara izao hanombohana ny dingana fikarohana amin'ny toerana itodiana dia lavitra. Tsindrio ny tranokala hotely an-tserasera rehetra ary zahao ny drafitr'izy ireo amin'ny famoronana traikefa vahiny azo antoka sy madio. Diniho ny safidy fisakafoanana eo an-toerana ary fantaro raha ny fenitra fanadiovana no mahatonga anao mahazo aina ampy hanaovana famandrihana. Raha mikasa ny hanao dia bisikileta ianao, ity koa no fotoana mety indrindra hampiakarana ny fotoana laninao amin'ny horonan-tsary fampihetseham-batana YouTube mba ho tonga tsara endrika rehefa esorina ny quarantine ary afaka ianao.